Hembe dzechiHindu dzevarume, ndezvipi zvipfeko zvechiHindu zvakajairika? | Absolut Kufamba
Hembe dzevarume vechiHindu
Zvezvipfeko zvinoshandiswa muIndia, vagadziri vazhinji vanoshandisa machira eakasiyana mavara uye mavara. Mu hembe dzevarumeIwo machira akagadzirirwa kumira chero chero mhando yemamiriro ekunze asina kunaka kana anotariswawo padzidziso dzechitendero.
zvose zvipfeko zvevarume muindia vanga vachigadziriswa. Izvi zvinodaro nekuti zvishoma nezvishoma simba reIslam rakapinda zvishoma nezvishoma mutsika dzeIndia, richishandura kunyangwe machira ehembe.
Mongolian simba Muzvipfeko zveIndia zvinozivikanwa zvakare nhasi ne mabhachi akasungwa izvo zvinogona kuonekwa nhasi mune zvimwe zvipfeko. Iri bhachi rakasungwa muchiuno rinonzi jama uye kana rakapfekwa nebhurugwa, zita rizere ndiro pijama.
Zvese indian zvipfeko inowedzeredzwa nemamwe mabwe egoridhe nesirivheri uye anoshandiswa kubva kumhete kumakumbo kana kumakumbo kusvika kubhaketi yenzvimbo yemhino (kunyangwe iyo yekupedzisira ichingoshandiswa nevakadzi).
Vanhu vakapfuma muIndia vanowanzo pfeka zvishongo zvekunyepedzeras, ayo ari iwo anoderedza makirasi, kupfuura jira rakagadzirwa nhumbi dzako.
1 Mhando dzezvipfeko zvechiHindu zvevarume
1.5 Churidar kana salwar
Mhando dzezvipfeko zvechiHindu zvevarume
Iyo dhoti rudzi rwezvipfeko zvechiHindu iyo inoshandiswa mu Bengal nzvimbo Kazhinji, asi zvishoma nezvishoma rave nguo rinoshandiswa mune mamwe matunhu eIndia.
Iyo nguvo ine chimiro chakakona uye chakagadzirwa chose mukotoni. Inogona kuyera kusvika pamamita mashanu uye yakaputirwa yakatenderedza muviri.
Kazhinji, dhoti Iyo mhando yechipfeko iyo iri chena kana kirimu kara. Inowanzo tenderera yakatenderedza chiuno nzvimbo uye pakati pemakumbo. Iyo yakareba, tora akareruka asi akanaka mabhurugwa uye kumusoro.
Khalat zvipfeko zvechiHindu yakagadzirirwa dhonje kana sirika (zvinoenderana nekuti munhu wega wega anochida sei) uye chinoshandiswa munzvimbo zhinji dzeIndia. Rudzi urwu rwechipfeko runogona kupfekwa nevarume nevakadzi zvakafanana, nekuti haina chero mhando yekusarudzika kwevakadzi.
Chipfeko ichi chinowanzo shandiswa semubairo wekukudza, sekungofanana nejasi rinoshandiswa muIndia.
Kunyangwe iri risiri rudzi rwembatya zvakadaro, iri zvakare chikamu chevarume muIndia. Chombo chidiki chezviratidzo zvekufananidzira chete. Iyo banga rinomiririra kupera kwekudzvinyirira nekusaruramisira.
Este Kuzadzikiswa kwembatya dzevarume muIndia, rakapfekwa pabhandi rinonzi Gatra. Pakutanga raive banga guru raishandiswa mumhemberero, asi mumazuva edu, rave kungove banga diki kupfeka pazvipfeko.
Chishongedzo ichi hachigone kushandiswa sechombo.
El kurta Ndirwo rumwe rudzi rwezvipfeko zvechiHindu zvevarume kubva kuIndia iyo inoumbwa nehembe yakakura uye yakasununguka iyo inowanzo svika panzvimbo yemabvi uye inogona kupfekwa nevarume kana vakadzi zvisina kujeka. Panyaya yevakadzi, iyo kurta inosvika pamusoro pebvi.
Kunyangwe munguva yekupedzisira, the kurta Inowanzo shandiswa nejean, kazhinji inoshandiswa neSalwar uye churidar bhurugwa. Aya mabhurugwa akapamhama, asi iwo ane peculiarity yekuti akasunganidzwa munzvimbo yemakumbo.
Rudzi urwu rwezvipfeko runogona kupfekwa sekupfeka zvepamutemo, kunyangwe vanhu vazhinji vanozvipfeka zuva nezuva.
Churidar kana salwar
El churidar rudzi rwakakurumbira rwemabhurugwa uye rave musiyano weiyo pants salwar; Nekudaro, iyo salwar inosiyana mukuti ivo vanokwenya pabendekete uye iyo churidar taper zvishoma vasati vasvika, izvo zvinovapa iwo kutaridzika kwakasiyana zvachose, zvichiita kuti kuratidzwa kwemakumbo kuonekwe mune yekupedzisira.
Mhando dzakanakisa dzemabhurugwa eiyi sitaira ndeaya ane zvishoma zvekusununguka, sezvo paanenge akaomarara, zvakakosha kuti munhu anoashandisa anokwanisa kufamba akasununguka.
Mukwanisi uyu anonzi "mafaro emadzimambo"Uye irwo rudzi rwe shawl rakarukwa chaizvo munoshandiswa tambo dzakasiyana dzevhudzi renondo. Varuki vemhando iyi yeshawuru vanocheka mari uye vanoita mabasa chaiwo eumhizha.
Pakutanga, mashawuru aya aive eumbozha hwechokwadi kune munhu aipfeka, nekuti nekuda kwekugadzirwa kwavo kunodhura uye kunotora nguva, mutengo wacho waive wakakwirira kwazvo. Uye zvakare, hunyanzvi hwakawanda hwaidikanwa kuti vakwanise kusona mvere dzenyoka pamwechete, nekuti vane dhayamita ye9 micrometer.
Iye munhu aive neshawl rakadai aive aine chinhu chinodhura uye chakakosha kwazvo.
Zvave kujekerwa kwauri kuti ndeipi iyo zvipfeko zvakajairika zvechiHindu zvevarume?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Hembe dzevarume vechiHindu
Zvipfeko, masiketi, uye madhirezi asina-forogo evarume ndiwo akanyanya kunaka sarudzo, Kune hutano, kunyaradza, uye kuremekedza. Bhurugwa iri torutra nguva dzose
sei vachingoshandisa mamodheru emurume kupfeka hembe idzodzo nekuti havashandise varume chaivo vanobva india
rakadii hembe rako
Iko kushandiswa kweOVEROL, kana bhurukwa, kuri kusimudzira hosha dzevanhurume vemazuva ano: kushaya simba, kushaya mbereko, matambudziko eprostate, gomarara repachende. Hakuna nhengo yemuviri wemurume inoshungurudzwa kana kushungurudzwa zvakanyanya senge nhengo dzesikarudzi. Pane zvimwe zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti murume apfeke ZVIKWERE. Iwo mabhurugwa anga ari mucherechedzo wekushungurudzwa, kuratidzwa, uye kunyadziswa kune vakadzi nevacheche. Zvirinani, zvine hutano, zvakasununguka uye zvine rukudzo, uye zvine hunyanzvi, zvekuti varume vanopfeka masiketi, kana madhirezi ane siketi.
ne nhetembo dzinotonhorera zvakajairika koshitomu vanhu ava vanayo kunze kwekuti inonyatsonaka
Kwandiri inoratidzika uye inoyevedza, zvipfeko zvakanakisa, ndinoshuva kuti dai ndaigona kuishandisa munyika yangu. Nyaradzo uye hutano kutanga.
Mhoro baba, wekupedzisira akapfeka nhema, anodonha achitaridzika
pane zvandiri kufungidzira neuyo akapfeka nhema ahyyyyyyyyyyyyyyyyyy baba ini ndoda kuona yako ……………… ..
Ndinoziva kuti iwe uri muIndia zvishoma asi chinhu chikuru hachiuye kwauri
uye kana ndiri guey yyyyyyyyyyyyyyyyy ?????????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!
Ndiri kuda kuti iwe uzive kuti iwe unorara neni pamubhedha, baba mune nhema !!!!!!
kwidza miridzo !!!!!!!!!!!!!!!
unogona kutumira zvinongedzo zvekushandisa dhoti
Maria Emilia akadaro
Mapfekero avo akajairika akanaka kwazvo nekuda kwekumanikidza kwemasanganiswa avo
zvese zvine mavara uye zvidimbu zvehembe.
Pindura kuna maria emilia
VAINDIYA VEINDIA VANE VAKOMANA PENIS JAAAAAAAA
Ivo vanobva kuIndia vane ……… .. Ivo vanoziva zvavanoishandisa.
Chikumbiro chemurume uye chakanakisa
uyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kunze kwemafashoni kuno muColombia asi idzo mbatya dzakanaka uye nevakadziwo
Pindura kuna tina
Colima Mexico akadaro
Kwete Mamen chipfeko chakasarudzika, chakashongedzwa, chisinganzwisisike uye kunyanya machinda anotaridzika zvakanyanya uye achikonzera kufara uye kuita kuti fungidziro ibhururuke. Vasikana pavanosangana ne INDU vabate uye vanonzwa vachienda kuIndia uye vakakomberedzwa nevakomana vakanaka
VANHU VANHU VANHU VANHU VANHU VAKANAKA VE INDIA Uye HAPANA CHINOTAURA PAMUSORO POKUPFEKA KWAVO NDINODA KUTI CHII CHINONYANYA GUNGWA RE INDIA Pasina Kuwedzeredza JEEJE
Ichi chakakosha chinopa murume uyu mweya wekunzwisisa panguva imwechete yekunaka, ino yakanaka
Ndinoda mbatya dzinobva kune dzimwe nyika asi zvakaoma kupokana pano muBolivia, Santa Cruz, ndinoda kutenga mbatya idzodzo nezvimwewo, ndingaawana sei, ndapota?
Jose Alfredo Velasco akadaro
Mumwe munhu anoziva kwandinogona kutenga iyo mhando yehembe, usaverenge kuti ndeyekuIndia chaiko, chete kuti ini ndoda kutenga uye kuno kwandinogara havazvitenge uye chokwadi ndechekuti ndinochida nekuti ndine ropa reIndia. asi ini ndinoda zvese kubva kuIndia
pindura x fas choreo yangu iri earvanggogh@hotmnail.com
Pindura kuna jose alfredo velasco
Ndine shamwari dzeIndu uye hadzipfeke kudaro asi iro rokwe rinoratidzika kunge rakandinakira
Pindura kuna ali
NDEIPI DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZINOGONA KUTI UONE UYE KUTENGA HOFU DZEVARUME INDU, NDATENDA
MuBarcelona pamugwagwa weCasp mune iyo Tribal Area chitoro
tsika iyoyo yakati shamisikei
victor eddy akadaro
Hembe dzavo chaidzo dzinonakidza asi chandisingade nezve indu ndechekuti vanonamata chero mhuka, semuenzaniso makonzo.
Pindura kuna Victor Eddy
Ijjj hembe dzako haha ​​xd xd
Pindura kuna alexin
maria de los angeles sanchez alvarez akadaro
mwana wangu anofanira kubuda akapfeka indu ndingawanepi sutu
Pindura kuna maria de los angeles sanchez alvarez
Zvinonakidza asi ivo vanofanirwa kutsanangura zvakanyanya iwo mavara eiyo orijen asi ini ndakafarira dhotiiiiiiii
Pindura kuna natashagb26
Selva de Irati, inzvimbo inoshamisira kuti uzvirasire